ओलीलाई कुनै पनि हालतमा बदला लिएरै छाड्ने मुडमा गौतम::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
शुक्रबार, बैशाख ६, २०७६ | Friday 19th April 2019
ओलीलाई कुनै पनि हालतमा बदला लिएरै छाड्ने मुडमा गौतम
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, साउन ३, २०७५
काठमाडौं – दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन भूमिका खेलेका नेता वामदेव गौतम अहिले मौन छन् । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हालिमुहाली गर्न थालेपछि गौतम खुसी छैनन् ।
उनले बेलाबेला असन्तुष्टिहरू पोख्ने गरेका छन् । गौतमले ओलीका क्रियाकलापलाई पनि रुचाएका छैनन् । मौका मिल्यो भने गौतमले ओलीसँग बदला लिने योजना बनाएको स्रोतको भनाई छ ।
कम्युनिस्टको सरकार भनेर प्रचार गरिएपनि चरित्र अनुसारको काम हुन नसकेको भन्दै उनले आलोचना गर्ने गरेका छन् । पार्टीका बैठक र गुटका भेलाहरूमा गौतमले ओलीले धोका दिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता बनेर हालिमुहाली गर्ने गौतमको योजनालाई ओलीले तुहाइदिएका थिए । पछिल्लो समय ओलीले गौतम र झलनाथ खनाललाई साइजमा राख्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नजिक ल्याएका छन् ।
गौतमलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्न प्रयास पनि भएको थियो । योगेश भट्टराईलगायतका केही नेताहरूले विधानमा उमेर हदको कुरा राख्न सुझाव दिएका थिए । तर, गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीमा उमेर हद राखेर अवैज्ञानिक कुरा गर्न नहुने भनेर विरोध गरेका थिए ।
‘योगेश भट्टराईलगायतले हैन, योगेश भट्टराई मात्रैले हो कुरा उठाएको । कुरा त उठाए बस्नेबेला मेरो मुखमा हेरे अनि टाउको निहुराए’, गौतमले प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका छन् । तत्कालीन एमालेमा ७० वर्ष पुगेका नेताहरूलाई सक्रिय राजनीति गर्न बन्देज लगाइएको थियो । नेकपा गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रपति बनाउने हल्ला पनि चलेको थियो । तर, विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रपतिको बाटो छेकिदिएकी थिइन् । ‘म शान्तपूर्वक निस्क्रिय भएर, ठूलो महलभित्र, कैदी भएर बस्न म चाहन्न’, गौतमले भनेका थिए–‘किनकि त्यो कार्यकारी पोस्ट हैन । सम्मानित पोस्ट हो । त्यस्तो ठाउँमा बस्नको निम्ति अहिले जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति उपयुक्त हो ।’
ओली चीन भ्रमणमा जाने बेला गौतमलाई बेवास्ता गरिएको थियो । गौतमलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिएर ओलीले माधवकुमार नेपाललाई दिएका थिए । त्यो कार्यबाट धेरैको मन दुखेको थियो ।
धोका पाएपनि ओलीलाई कुनै पनि सर्त राखेर आफूले साथ दिएको गोतमले बताउने गरेका छन् । ‘मैले निःस्वार्थ समर्थन गर्दागर्दै पनि उहाँले कतिपय कुरा भन्नु भयो । यसपछि तपाईं हो, यसपछि अब तपाईं हुने हो भन्नुभयो । तपाईंपछि बरु म यो हुने हो आदि जस्ता कुरा उहाँ आफैले भन्या हो’, गौतमले भनेका छन्–‘खासमा मैले गुट कहिलै चलाइनँ ।’
ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको गौतमले आरोप लगाएका छन् । महँगी नियन्त्रण पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकार शक्तिशाली भए पनि काम गर्न नसकेको आरोप गौतमले लगाएका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
‘नेपाल बन्द’ सकिएपछि विप्लवले गरे नयाँ संघर्षको आह्वान !
ओली सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा तरुण दलले मोर्चा सम्हाल्ने, निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति
पत्नी लिएर सुकुटे पुगे प्रचण्ड, के पाक्दैछ खिचडी ?
गुण्डा नाइके मनाङ्गेका चेला करोडौं कुम्ल्याएर हङकङ भाग्ने तयारीमा घिसिङ
स्वास्थ्यमा २२ अर्ब हिनामिना, रातारात बने मेडिकल माफिया पण्डित अर्बपति
ज्यानमारा बर्डफ्लु फैलिँदै, मासु खानेहरू सावधान ! कहाँ–कहाँ बढी खतरा ?
एनबी बैंकभित्र २२ करोड घोटला काण्ड, प्रचण्डका पार्टनरको नाम जोडियो
किन गर्छन् श्रष्टाले सिर्जना ?
सरकारले गर्‍यो ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा
ओली सरकारविरुद्ध ९ दिने आन्दोलन, देशव्यापी आहड्तालसहित बन्द आह्वान !
ओली सरकारले हटायो वृद्धभत्ता, ज्येष्ठ नागरिक आक्रोशित !
बिना मगरका पूर्वपति शंकरबारे दर्दनाक खुलासा ! पत्नीबाटै ठूलो धोका पाएपछि …
मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्लामै कम्युनिस्टको पत्तासाफ, कांग्रेसीको सानदार जितपछि खुशीयाली
माओवादीले बम प्रहार गर्दा सांसदसहित ५ जनाको मृत्यु
मनकारी कांग्रेस: बगाइदियो राहतको खोलो, पीडितको घाउँमा मलम लाग्दै
पूर्वसांसदको जीन्दगी यसरी बर्बाद बनायो मेडिसिटीले, अस्पतालका मालिक र डाक्टरहरूको भागाभाग
ओली सरकारलाई ठाडो चुनौती, आजदेखि देशभर अनिश्चितकालीन बन्द